Izici zemishini yokugunda utshani umsebenzi ophansi, ukusebenza okulula, namandla okusika aqinile wezinto ezidinga ukusikwa, ikakhulukazi utshani, futhi zilungele izindawo ezinotshani ezithela kakhulu namapaki amakhulu. Umshini wokusika utshani usika utshani ngenhlangano yokugunda ehlobene ...
Ithimba labathengisi bakaZhengchida lihambele umbukiso wama-22 weHortiflorexpo IPM Beijing ngoSepthemba 16-18, 2020. Umcimbi wokuvula ubungumbukwane omuhle. Ngenxa ye-convid-19, lo ngumbukiso wokuqala nophela wokuthi thina ...
Izikhali Zomshini Ezizenzakalelayo Inguquko Yenqubo
Esikhathini esingengakanani esidlule, uZhengchida ubenamalungu amasha ku-workshop, abalethe ngokusebenza okuphezulu kanye nekhwalithi engcono kwimikhiqizo. Yizikhali ezizenzakalelayo zemishini. Iphrojekthi yokuthuthukiswa kwemishini ezenzakalelayo yaqalwa ekuqaleni kuka-2019. Ithimba lonjiniyela abanolwazi lamiswa njenge ...